Martech Zone | Nyocha, Chọpụta, Mụta Azụmaahịa na Teknụzụ Azụmaahịa
Kedu ihe bụ Swag? Ọ bara uru itinye ego ahịa ahịa?
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ogologo oge, ị maara ihe swag bụ. Ọ dịtụla mgbe ị nọ na-eche banyere ebe okwu a si malite? A na-akpọ Swag n'ezie maka ihe ezuru ohi ma ọ bụ ngwongwo ejiri na 1800s. Okwu ahụ bụ akpa bụ isi iyi maka slang… ị tinyere ngwongwo gị niile n'ime akpa okirikiri wee gbanarị swag gị. Ụlọ ọrụ ndị na-edekọ ihe nakweere okwu ahụ na mmalite 2000s mgbe ha na-ejikọta akpa
Nzọụkwụ 4 iji mejuputa ma ọ bụ hichaa data CRM iji bulie arụmọrụ ahịa gị
Companieslọ ọrụ ndị chọrọ ịkwalite arụmọrụ ahịa ha na-etinyekarị ego na atụmatụ mmejuputa nke ikpo okwu njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM). Anyị atụlewo ihe kpatara ụlọ ọrụ ji etinye CRM, ụlọ ọrụ na-emekarị nzọụkwụ… mana mgbanwe na-adakarị n'ihi ihe ole na ole: Data - Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-ahọrọ ikpofu data nke akaụntụ ha na kọntaktị n'ime ikpo okwu CRM na data adịghị ọcha. Ọ bụrụ na ha etinyelarị CRM,
Dinta: Otu esi achọta adreesị ozi-e kọntaktị B2B n'ime sekọnd
Enwere oge mgbe ịchọrọ naanị ịnweta adreesị ozi-e iji kpọtụrụ onye ọrụ ibe ị na-enweghị na akwụkwọ adreesị gị. Ọ na-eju m anya, dịka ọmụmaatụ, mmadụ ole nwere akaụntụ LinkedIn debanyere aha na adreesị ozi-e nkeonwe. Anyị ejikọrọ, yabụ ana m ele ha anya, dobe ha email… wee nweta nzaghachi. Aga m aga site na interface ozi ozugbo n'ofe saịtị mgbasa ozi na nzaghachi
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-eme mgbasa ozi, obi abụọ adịghị ya na email bụ usoro dị oke mkpa iji mee ya. Ma ọ na-etinye mmetụta ma ọ bụ mbipụta na akụkọ, pọdkastị maka ajụjụ ọnụ, mgbasa ozi ahịa, ma ọ bụ ịnwa ide ọdịnaya bara uru maka saịtị iji nweta njikọ azụ azụ. Usoro maka mkpọsa mgbasa ozi bụ: Chọpụta ohere gị wee chọta ndị kwesịrị ekwesị ịkpọtụrụ. Zụlite ọkwa gị na ikike iji mee nke gị